Prof Yahye Sheekh Caamir oo sheegay in Shabaab oo kaliya aysan Muqdisho Qaraxyada ka geeysan – Banaadir Times
By banaadir 22nd September 2018 173 No comment
Prof. Yaxye Sheekh Caamir, oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho, sidoo kalena ah fallanqeeye siyaasadeed ayaa ka hadlay laba qarax oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, oo mid ka mid ah uu ka badbaaday.
Qoraal uu soo dhigay facebookiisa ayuu ku sheegay in kursiga uu fadhiyey lagu xiray qaraxa balse Aalle ka badbaadiyey xiligaasna uu ka dagay gaariga .
Prof ayaa sheegay in Qaraxa isaga loola dan lahaa balse qadartii alle ay u timid walaalkiis oo qaraxa ku geeriyooday.
Prof Yahye Shiikh Caamir ayaa waxaa uu sheegay in Dilka walaalkii iyo Qaraxyada Muqdisho aan dusha laga saari karin Alshabaab oo kaliya isagoona xusay in Muqdisho ay ka howlgalaan 7 koox oo dadka ku dila Magaalada.
“Magaalada Muqdisho, waxaa wax ku dila toddoba kooxood oo kala duwan, oo Shabaab kaliya ma fuliyaan dilalka. Sidaas darteedna ma garan karo cidda dishay walaalkey” ayuu yiri Yaxye Sheekh Caamir.
Prof Yahye Shiikh Caamir Wiil la dhashay oo ku dhintay Qaraxyadii Muqdisho ka dhacay
Sawirro: Shirka Isku-xirka Caddaaladda Oo Looga Hadlay Fulinta Go’aannaada Maxkamadaha
Ciidamada Australia oo lagu helay dambiyo dagaal oo ay ka gaysteen Afghanistan
By banaadir 19th November 2020